नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मिलेर पहिलोपटक ल्याए यस्तो अफर ! « Etajakhabar
नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मिलेर पहिलोपटक ल्याए यस्तो अफर !
प्रकाशित मिति : १३ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०९:२८
नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच आज उक्त सेवासम्बन्धी सम्झौता भएको टेलिकमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । बंैकले मुलुकभरका २३८ वटै शाखाबाट नयाँ खाता खोल्ने ग्राहकलाई कम्पनीको सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने छ । सो सिममा रु ५० टक भ्यालुसमेत हुनेछ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले दुई करोडभन्दा बढी ग्राहक सङ्ख्या भएको नेपाल टेलिकम र ३० लाख बढी सेवाग्राही भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बंैकबीच भएको यो सम्झौताले आम सेवाग्राही वित्तीय र प्रविधिगतरुपले निकै लाभान्वित हुने बताउनुभयो ।
बैंकका कर्मचारीमाथि आ क्रमण
अज्ञात समूहले पुनर्वास नगरपालिकाको आइबीआरडी बजारमा आज दुई बैंक कर्मचारीमाथि सा:ङ्घातिक आ:क्रमण गरेको छ । आक्रमणबाट माछापुच्छ्रे« बैंकमा कार्यरत प्रवीन भट्ट र शारदा पन्त घाइते भएका छन् ।
दुवै जनाको टा:उको र मुखमा चो:ट लागेको प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो । बैंकका व्यवस्थापक भट्टलाई उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ । पन्तको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । प्रहरी उपरीक्षक आचार्यका अनुसार स्कुटरमा आएका तीन जनाले दुवै कर्मचारीलाई पुनर्वासबाट धनगढी आउने क्रममा आ:क्रमण गरेका हुन् । प्रहरीले आ:क्रमणकारीको खोजी गरिरहेको छ ।